Manchester City Oo U Soo Baxfay Semi Finalka Fa Cup-ka
HomeHoryaalada KaleManchester City oo u soo baxfay Semi Finalka Fa Cup-ka
March 21, 2021 Horyaalada Kale, Wararka Ciyaaraha 0
Kooxda Manchester City ayaa guul ay ka gaartay Everton iskaga Xaadirisay Finalka Koobka FA-Cup-ka.
City ayaa ugu Filnaa labo Gool in ay ku Xaqiijiso isoo Bixitaanka Semi Finalka Koobkan kuwaasi oo yimid Qeybta Danbe ee Ciyaarta.
Inkastoo City ay kubada heysatay in ka badan boqolkiiba 70 hadana waa ay awoodi waayeen qeybtii hore ee ciyaarta inay heleen fursado badan, iyadoo lagu kala nastay barbaro goolal la’aan ah.
Manchester City ayaa ugu danbeyn hogaanka u qabatay daqiiqadii 84aad ee ciyaarta markii kubad ka baxday cagta Laporte ay ku dhacday birta, kubadii soo laabatay ayaa waxaa madax ku dhaliyay Gundogan.
Man City ayaa guusha xaqiijisatay markii uu shabaqa u soo taabtay xiddigii kursiga keydka ka soo Kevin de Bruyne daqiiqadii 90aad ee ciyaarta isagoo caawin ka helay Rodri oo isna markaas bedel ku yimid.
Guud ahaan ciyaarta ayaa ku dhamaatay 2-0 oo ay Manchester City ku garaacday Everton uguna soo gudubtay semi-finalka FA Cup, waxay kula biirayaa kooxda Southampton oo maanta mar sii horeysay 3-0 ku garaacday Bournemouth.
Manchester City ayaa kulanka xiga la ciyaareysa Kooxda Leicester City.